Iskaa wax u qabso ku jikada - Cuntooyinka Lugaha
Iskaa wax u qabso ugu shaqee Jikadayada
Ma dooneysaa inaad door muhiim ah ka ciyaarto helitaanka cunnooyinka nafaqada leh ee waayeelka iyo dadka naafada ah ee bulshadeenna? Tabarucidda Jikada Fursadaha waa hab fiican oo lagu caawiyo!
Meals on Wheels Jikada Fursadaha waa jikada ugu horraysa ee u heellan siinta cuntada barnaamijyada Twin Cities Meals on Wheels waxayna ku taal koonfurta Minneapolis. Mutadawiciinta ayaa loo baahan yahay si ay uga caawiyaan hawlaha sida duubista duubabka rootiga, gooyn khudaarta, qaadida cajiinka buskudka, iyo isu-ururinta cuntooyinka maalinlaha ah. Tabarucayaashu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan u suurtagelinta jikada inay soo saaraan ilaa 2,500 oo cunto ah maalintii dadka u baahan.
Haddii aad raadinayso hab aad ugu tabarucdo Cunnooyinka Shaagagga ee aan ku tiirsanayn ka shaqaynta gaadhi ama aad ku raaxaysanayso muuqaalada gadaashiisa ee eeg sida cuntadayada loo diyaariyo, tani waa fursad fiican. Shaqooyinka jikada waxa la heli karaa 8 subaxnimo-4 galabnimo Isniin-Sabti ilaa shan qofna way tabaruci karaan inta lagu jiro saacadaha 2-saac.
Laga bilaabo Febraayo 1, 2022, Gacmaha Furan, lammaaneheena ku jira Jikada Fursadaha ee Wheels, waxay bilaabi doontaa qabashada diiwaangelinta mutadawiciinta jikada. Waxaad iska diiwaan gelin kartaa Hubka Tabarucaadka Hubka ee Furan adigoo isticmaalaya isku xirka: https://openarmsmn.volunteerhub.com.
Haddii aad su'aalo qabto, fadlan kala xidhiidh Madi at [email protected].
Su’aalaha La Weydiiyo Tabaruceyaasha Jikada
Sidee iskaa wax u qabso iskaa wax u qabso ah shaqada caadiga ah u shaqaysaa?
Tabarucayaashu waxay soo xaadiraan bilawga shaqada jikada halkaasoo lagu siin doono liiska hawlaha maalinta. Hawlaha jikada ee caadiga ah waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, duubista duubabka roodhida, jarjaridda khudaarta, maraqa baakadka, cajiinka buskudka, iyo isu-ururinta cuntooyinka maalinlaha ah.
Goorma ayaan tabaruc ku sameyn karaa jikada?
Shaqooyinka jikada ayaa diyaar ah wakhti kasta inta u dhaxaysa 8 subaxnimo iyo 4 galabnimo Isniin-Sabti. Isku qor ilaa wakhti taasi adiga ayay kugu habboon tahay oo waxaad la shaqayn kartaa maareeyahaaga iskaa wax u qabso ah si aad u jadwaleyso waqtiyo joogto ah si joogto ah.
Muddo intee le'eg ayay isbeddelada jikada?
Shifts 2 saacadood oo la heli karaa inta u dhaxaysa 9 subaxnimo iyo 3 galabnimo maalin kasta.
miyaan si mutadawacnimo ah ula shaqeeyaa saaxiib ama koox?
Haa! Ilaa shan mutadawiciin ah ayaa iska qori kara wakhti kasta oo jikada ah.
Sideen ku tagaa Jikada Fursadaha?
Jikada Fursadaha waxay ku taal 3025 4th Ave. S., gudaha Minneapolis, kaas oo saaran ama u dhow khadadka baska 11, 21 iyo 27. Baarkinku wuxuu diyaar ku yahay meesha yar ee ku taal woqooyiga 31st Street inta u dhaxaysa 4th iyo 5th Ave (sawirka hoose), haddii kale waxaa jira meelo badan oo bilaash ah oo baabuurta la dhigto.
Fadlan ka soo gal albaabka u dhow xirashada xamuulka, oo ka baxsan luuqda u goysa Waddada 31aad:
Maxaan filan karaa markaan imaado shaqadayda koowaad?
Waxaan kaa codsaneynaa inaad imaatinkaaga shaqada tabarucaada ugu horeysa aad timaado 15 daqiiqo kahor si aad uhesho booqashada jikada, aad wax uga barato nidaamka nabadgelyada, una buuxiso waraaqaha qaarkood.
Maxaan xirtaa markaan tabarucayo jikada?
Waa inaad ku xidhataa kabo fidsan, suulasha jikada. Fadlan guriga uga tag dahabka oo ay ku jiraan saacadaha, oo ha xidhin dusha gacmo-galka, surwaal gaagaaban, ama alaab dhar dabacsan oo dabacsan oo faragelin ku yeelan kara diyaarinta cuntada. Haddii aad timo dheer leedahay, waad xiran kartaa koofiyad ama faashad, ama timo ayaa la siinayaa.
Sideen iskuqortaa si aan tabaruc ugu sameeyo jikada?
Haddi aad tahay tabaruce cusub ama soo laabanaysa, waxaad isku qori kartaa xilliyada shaqada halkan.
Saxiix Si Aad Isaga Wax U Qabso
Diyaar ma u tahay inaad bilowdo tabarucida Cuntooyinka Lugaha Lugta? Saxiix halkan.
Saxiix u wareejinta Jikada
Miyaad tabaruc ka sameysay Cunnooyinka Wheels-ka Jikada Fursadaha? Saxiix u wareejinta mustaqbalka ee Xarunta Tabaruca.